Wasaaradda duulista hawada Puntland oo sheegatay in Galkacyo loo samaynayo Garoon cusub oo Diyaaradeed. (Dhegayso) – Radio Daljir
Diseembar 17, 2012 3:22 b 0
Garowe, Dec, 17 ? Wasiir kuxiggeenka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland Cabdiqani Geele Maxamed oo waraysi gaar ah siiyay Radio Daljir ayaa sheegay inay ganacsatada Gaalkacyo kala-shireen hirgalinta garoon cusub oo ay yeelanayso magaalada Gaalkacyo, arrintaasina ganacsatadu si wayn ay usoo dhaweeyeen.
Wasiir Cabdiqani ayaa hadalkiisa raacsaday inay muddooyinkii ugu dambeeyay wadeen qorshayaal lagu dayac-tirayo dhammaan garoomada diyaaradaha ee gobollada Puntland, arrimaha dayactirka qarashaadka ku baxayana ay iska kaashanayaan maamulka iyo qaybaha bulshada ku dhaqan Puntland.
Sidoo kale Wasiir kuxigeenku waxaa uu ammaan iyo boogaadin u soo jeediyay ganacsatada gobolka Bari oo uu ku tilmaamay kuwo ay ka go?antahay hormarinta gobolka Bari.
Dawlada Puntland ayaa mudooyinkii danbe wadey qorshayaal lagu horumarinayo ilaha dhaqaalaha Puntland gaar ahaana garoomadda iyo Dekedaha kuwaasoo lagu dhisayo nidaamka loo yaqaano ?Public Private Partnership oo ah in Dawlada, shacabka iyo deeq bixiyayaashu kawada qayb galaan dhismayaashaasi.